Momba ny solonanarana - Karajia Resaka Mivantana
You are here: home> Fanoroana> Momba ny solonanaran...
Momba ny solonanarana
Ho hitano ato
Inona no atao hoe solonanarana ?
Nahoana no lasa "Anonyme" ny solonanarako ?
Ahoana no fanovana ny solonanarana ?
Ahoana no atao mba tsy hisy haka ny solonanarako?
Ahoana no atao raha hanova tenimiafina ?
Ahoana no atao raha adino ny tenimiafina ?
Ahoana no atao raha tapaka ny fifandraisana ka tavela eo ny solonanarana?
Eto amin'ny karajia dia manana solonanarana ny tsirairay vao afaka miditra. Tsy voatery hitovy amin'ny solonanarana fampiasanao ao amin'ny namana.serasera.org akory ny solonanarana eto. Samy afaka mampiasa ny solonanarana tiany ampiasaina rehefa mifanaraka amin'ny fitsipika mifehy momba ny solonanarana.
Ny solonanarana dia tokony hazava, tokony ho azo vakiana. Araka ny fitsipika, ny solonanarana miteny ratsy sy manafintohina dia hofafaina avy hatrany.
Raha miova ho Anonyme ho azy ny solonanaranao rehefa miditra ao amin'ny karajia dia efa misy tompony izy izay na efa misy mampiasa. Jereo ery ambany ny fomba atao mba tsy hisy haka ny solonanaranao.
Afaka mampiasa ny solonanarana izay tiany ny mpi-karajia, rehefa mifanaraka amin'ny fitsipika sy eken'ny ordinateur. Afaka manova solonanarana ihany koa ianao raha tianao izany. Amin'izao fotoana izao anefa dia tsy afaka manova solonanarana ao anatin'ny #serasera ianao fa raha hanova solonanarana dia tsy maintsy mivoaka aloha.
Raha hanova solonanarana ary dia ireto no soratanao ao amin'ny karajia atao.
(io no atao rehefa mivoaka ny karajia #serasera)
(io no atao rehefa manova solonanarana)
(io no atao rehefa miditra ao amin'ny serasera indray)
Raha toa ka tsy tianao ho lasan'ny olona ny solonanaranao dia azonao atao ny mamandrika azy (enregistrement) sy miaro azy amin'ny alalan'ny tenimiafina.
1. Toa izao ary ny famandrihana ny solonanarana
Rehefa tafiditra ao amin'ny karajia ianao dia soraty ity ambany ity
/msg NICKSERV register tenimiafina email
(ny tenimiafina dia ny tenimiafina tianao hidirana. Hotakiana aminao isaky ny mihetsika io. Ny email kosa dia ny adiresy email-nao izay handefasana ny fanamarinana)
Rehefa avy eo dia jereo ny email-nao fa nalefa any ny fanamarinana sy ny toromarika fidirana. Raha marina ny adiresy napetrakao dia eo amin'ny 3 minitra eo dia efa tokony ho tonga any aminao io email io.
Araho ny toromarika ao amin'ilay email. Izany hoe miverena ao amin'ny karajia #serasera dia ampidiro ao ilay toromarika tany amin'ilay email. Ohatra hoe:
/msg NICKSERV confirm eWS3XboI
Holazainy avy eo fa voafandrika ho anao io solonanarana io. Ny dikan'izany dia anao irery io solonanarana io ka raha sendra misy mampiasa azy kanefa tsy mampiditra tenimiafina dia hoesorina aminy ny solonanarana. Ianao koa izany isaky ny mampiasa ny solonanaranao dia tsy maintsy mampiasa ny tenimiafina.
2. Ny fomba fampidirana ny tenimiafina
Raha toa ka anao ny solonanarana dia manana 1 minitra ianao hampidirana haingana ny tenimiafina. Ka toa izao ny fanaovana izany.
Rehefa tafiditra ao amin'ny karajia #serasera ianao dia soraty
/msg NICKSERV identify tenimiafina
(Ka ny tenimiafina dia ilay tenimiafina nampidirinao tetsy ambony)
N.B. Marihina fa raha tsy tafiditra ao anatin'ny 1 minitra io tenimiafina io dia miova ho AnonymeXXXXXX ny solonanaranao.
Ahoana no atao raha hanova tenimiafina
/MSG NICKSERV SET PASSWORD tenimiafina_vaovao
dia ho voaova ny tenimiafinao.
Ahoana no atao raha adino ny tenimiafina
Raha adino ny tenimiafina dia ampiasao ny commande /msg nickserv SENDPASS pseudo
Ahoana no atao raha tapaka ka tavela eo ny solonanarana
Indraindray raha sendra tapaka tampoka dia mbola tavela eo ny solonanarana teo aloha. Raha ohatra ka tianao hiverenana iny solonanarana iny dia soraty hoe
/msg NICKSERV GHOST solonanarana tenimiafina
Ka ilay solonanarana dia ilay tavela ary ny tenimiafina dia izay tenimiafina miaraka amin'io solonanarana io.
< Fanontaniana manitikitika
Komandy vitsivitsy >